Mg Htay's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Blog Posts (2)DiscussionsEventsGroups Mg Htay's Likes Gifts Received
Mg Htay has not received any gifts yet
Mg Htay's Page
Jake commented on Mg Htay's blog post အင်တာနက် နဲ့ပတ်သက်လို့အကူအညီလိုနေလုိ့ပါ။"You can use Netflow if your gateway router supports it. But if it's too difficult to use Netflow, you can use DD-WRT firmware onasimple wireless router. The idea is to use WAN traffic monitoring function from DD-WRT. DD-WRT is customized…"Jun 7, 2012Mg Htay postedablog postအင်တာနက် နဲ့ပတ်သက်လို့အကူအညီလိုနေလုိ့ပါ။MMITpro မှ မိတ်ဆွေများခင်ဗျား ကျွန်တော်တို့ ရုံးမှာ IP star အင်တာနက်လိုင်း တပ်ဆင်အသုံးပြုထားပါတယ်။ 2G အတွက် လစဉ်ကြေး (145000)ကျပ်ကျသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုတာ 2G ထက်ကျော်သွားရင် ကျော်တဲ့အလျောက် ကျသင့်ငွေကို ထပ်မံပေးသွင်းရပါတယ်။ ရုံးလုပ်ငန်းသုံးတာက Email တစ်ခုပဲဆိုတော့ 2G နဲ့ လုံလောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း အင်တာနက်web site တွေမှာ ၀င်ရောက်ရှာဖွေစူးစမ်းချင်တယ်ဆိုတော့ အင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့ လ တစ် လ အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ သုံးတာ ဘယ်လောက်ရှိနေပြီ၊ 2G ဆိုတဲ့ကန့်သတ်ဘောင်ပြည့်ဖို့…See MoreJun 6, 2012 1
Mg Htay liked manawphyulay's blog post ဥာဏ်စမ်းလေးတွေ ဖြေကြည့်ရအောင်Apr 18, 2012Mg Htay postedablog postထူးဆန်းတဲ့ Anti-Virus ကျွန်တော့် Computer ကို Anti-virus က အနှောက်အယှက်ပေးနေပါတယ်။စက်ထဲမှာရှိတဲ့ .exe ဖိုင်အားလုံးကို Virus လို့သတ်မှတ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်က Avira Anti-Virus ကိုသုံးပါတယ်။ Partition 3ခုခွဲပြီး window-XP(C),window-7(D)နဲ့Data(E)ဆိုပြီးသုံးပါတယ်။သုံးလာတဲ့(၁)နှစ်ကျော်ကျော်သက်တမ်းအတွင်းမှာ အားလုံးအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ (၂)ရက်ကမှAvira -Antivirus က စက်ထဲမှာ Virus ထောင်ချီပြီးရှိနေတယ်လို့ Alarm ပေးပါတယ်။ သူပြောတဲ့Virus ဆိုတာတွေက Pagemker-7,PhotoshopCS,WinRAR,စတဲ့ Software တွေရဲ့ .exe ဖိုင်တွေ၊Game…See MoreApr 28, 2011 2
Mg Htay is nowamember of MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT ProfessionalsJul 23, 2010 Welcome Them! RSS
Ngwekabar Myanmar Co.,ltd
Mg Htay's Blog
Posted on June 5, 2012 at 5:08pm 1 Comment
MMITpro မှ မိတ်ဆွေများခင်ဗျား
ကျွန်တော်တို့ ရုံးမှာ IP star အင်တာနက်လိုင်း တပ်ဆင်အသုံးပြုထားပါတယ်။ 2G အတွက် လစဉ်ကြေး (145000)ကျပ်ကျသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုတာ 2G ထက်ကျော်သွားရင် ကျော်တဲ့အလျောက် ကျသင့်ငွေကို ထပ်မံပေးသွင်းရပါတယ်။ ရုံးလုပ်ငန်းသုံးတာက Email တစ်ခုပဲဆိုတော့ 2G နဲ့ လုံလောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း အင်တာနက်web site တွေမှာ ၀င်ရောက်ရှာဖွေစူးစမ်းချင်တယ်ဆိုတော့ အင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့ လ တစ် လ အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ သုံးတာ ဘယ်လောက်ရှိနေပြီ၊ 2G… Continue ထူးဆန်းတဲ့ Anti-Virus
Posted on April 28, 2011 at 12:14pm2Comments
ကျွန်တော့် Computer ကို Anti-virus က အနှောက်အယှက်ပေးနေပါတယ်။စက်ထဲမှာရှိတဲ့ .exe ဖိုင်အားလုံးကို Virus လို့သတ်မှတ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်က Avira Anti-Virus ကိုသုံးပါတယ်။ Partition 3ခုခွဲပြီး window-XP(C),window-7(D)နဲ့Data(E)ဆိုပြီးသုံးပါတယ်။သုံးလာတဲ့(၁)နှစ်ကျော်ကျော်သက်တမ်းအတွင်းမှာ အားလုံးအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ (၂)ရက်ကမှAvira -Antivirus က စက်ထဲမှာ Virus ထောင်ချီပြီးရှိနေတယ်လို့ Alarm ပေးပါတယ်။ သူပြောတဲ့Virus ဆိုတာတွေက Pagemker-7,PhotoshopCS,WinRAR,စတဲ့ Software တွေရဲ့ .exe… Continue AddaBlog Post
bonlay replied to YGNpaohpay's discussion CCNA EXAM25 minutes agoKyaw Nanda Oo replied to Sithu's discussion Help me for my internet cafe..yesterdayKyaw Nanda Oo replied to လမာနော်ဆန့် 's discussion I want to Router & TP link configuration vidio fileyesterdayThet Aung postedadiscussionလုပ်ငန်းအဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်းFriday 0